भारी बर्षाका कारण बुटवल महानगरपालिकामा मतदान सुरु भएन – YesKathmandu.com
काठमाडौं । सर्वाधिक चासोको रुपमा हेरिएको बुटवल उपमहानगरपालिकामा भारी बर्षाका कारण मतदान सुरु हुन सकेको छैन । विहान ७ बजेदेखि मतदान गर्ने भनिएपनि निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीको लापरवाही र बर्षाका कारण मतदान सुरु हुन नसकेको हो ।
८ बजेसम्म मतदान सुरु नभएपछि एमाले उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले निर्वाचनमा खट्टिएका कर्मचारी प्रति आक्रोस पोखेका छन् । बर्षाको पुर्वाअनुमान भएपनि निर्वाचन आयोगले प्रवन्ध मिलाउन नसकेको बताएको छ । मतदान केन्द्र र मत पेटिकामा पानी पर्न सक्ने भन्दै उनले हदैसम्मको लापरवाही निर्वाचन समितिले गरेको बताए ।
३ सय ३४ स्थानीय तहमा मतदान जारी, ६२ हजार ४ सय ८ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा
सभापति ज्यु सम्वन्धित निकायलाई दिएका ४१ वटा निर्देशनको अवस्था के छ ?
म सभापतिको उम्मेद्धार हुँ : पौडेल
परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले ४ बुंदे सहमति गरेको भारतीय राज्यसभामा खुलासा
कमल थापाले पेलेपछि डा. लोहनीले लिए थापाविरुद्ध ‘एक्सन’
नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको पहिलो बैठक काठमाडौंमा